Annual Indidane Maskandi Festival – Maskandi Media
Annual Indidane Maskandi Festival
Likhulu kakhulu idumela lalo mcimbi. Inhloso yawo kwaba ukuqinisekisa ukuthi umndeni weqhawe awusweli ngoba seliswelakele lona. Lo mcimbi waqalwa ngonyaka wokuqala ihambile Indidane
ngenhloso ykugwema ububha obuvame ukwenzeka emzini yabaculi uma esehambile umculi. Awukaze ungabi impumelelo kusukela waqalwa. Uthande ukuphazamiseka kancane
ngendlela yesimo sezulu esingabanga sihle kulonyaka wama 2019. Kanti nosuka owawubekwe ngalo alubanga luhle njengoba abantu abaningi abathanda uMaskandi babesemaholidini ephasika. Nokho wahamba kahle kakhulu njengoba kwabonakala nabaculi abaningi abasebancane endimeni bezitika ngo-live performance.
Kwagqama kakhulu ukuthi baningi abaculi abadala abavale izikhala kubantu abancane ngoba izinga labo lokudlala estage selithanda ukwehla kakhulu. Abathandi bomculo bazicelela ukuthi kunikwe ithuba abaculi abafana noQhosha bedlale live manje nabo ngoba babizelwe kulento.
Lonke lolo bizo lwabonakala khona njalo emcimbini weNdidane. Sesingasho sithi izinga lalo
mcimbi likhule ngendlela esimanga. “Sithanda ukudlulisa ukubonga kwethu kubo bonke abantu abadela ubumnandi bezinkonzo zephasika badela nezibiliboco bakhetha ukuzoba kanye nathi ngesikhathi esinzima sokukhumbula kanye nokwenzela Indidane umcimbi wayo”.
“Lo mcimbi sihlose ngawo ukuthi igama likaMtshengiseni lingafadalali kodwa liqhubeke njalo lihlonipheke endimeni ngoba wayewuthanda kakhulu umculo wakhe kanti nabantu babemthanda”.
“Kuyathokozisa ukubona izinga lawo likhula ngale ndlela kuvela nezinye izinto ezenziwa iqembu lonkana eceleni ukuze igama lale nsizwa lingakhohlakali endimeni. Sithanda ukudlulisa umlayezo wokuthi ngeke siwuyeke lomcimbi kumnyama kubomvu uzobakhona mnyaka yonke ngoba siyabona ukuthi uwusizo kanjani emndenini nekubantwana beqhawe”. Kusho uTununu.
Previous Previous post: Ithole indawo kubantu ekaDlubheke
Next Next post: Khuphuka nezakho sibone inkunzi